umdlavuza lesizalo ikhulela umsipha noma lesizalo mucosa. Ukwahlukaniswa izimila kuncike kulokho okwenzeka ungqimba ukuvuvukala. Ithumba ezivamile kwesibeletho ubhekwa i adenocarcinoma, bungavami lesizalo leyomisarkoma. Adenocarcinoma libhekisela izimila abulalayo ukuthi ukuthuthukisa kusukela endometrium (ungqimba kwangaphakathi kwesibeletho), leyomisarkoma zenzeka kusukela imisipha kwesibeletho. Ngo umdlavuza, izimila esibelethweni, ngokuvamile unomzimba ukukhula exophytic, akuvamile - futhi endophytic okuxubile. Ngokuyinhloko isimila kuthinta fundal (cishe 50% azo zonke izimo), kodwa kungase amboze zonke noma umgodi isiqeshana sezwe.
Izimiso yentuthuko adenocarcinoma
Lesizalo Adenocarcinoma kuyinto izimila-hormone okuthiwa i-engaphansi, kusukela endometrium kakhulu ebucayi emiphumeleni estrogens futhi cishe ukuqondisa-hormone ngokobulili. Umdlavuza umzimba lesizalo futhi ezihlobene kuyinto oluvamile kakhulu kwabesifazane iminyaka 50-65 of menopause, ngezinye izikhathi premenopause isikhathi abesifazane abaneminyaka 35 - 40 iminyaka. Okuhlaselayo amaseli anomdlavuza izimila bathambekele iyakhula (ukusabalala) ku izicubu eduze kwezinye izitho - e wesibeletho, amaqanda futhi amashubhu fallopian singene ezithweni ezizungezile, lymph kanye lymph node, igazi futhi ngalo - kwezitho ezikude.
adenocarcinoma lesizalo. izimpawu
Kwezinye izimo, ukuthuthukisa lesizalo adenocarcinoma kungenzeka asymptomatic futhi azibonakali ngesikhathi ngihlolwa olandelayo noma lapho lesi sifo esingilitholile esizayo. Nephunga elibi osenyameni lwesitho sangasese sowesifazane kanye ubuhlungu besisu aphansi ezibhekwa izimpawu esongela umdlavuza kamuva esiteji. adenocarcinoma wesibeletho kusaqalwa kungase kuhambisane igazi enqubeni sokuya ocansini emabangeni kamuva lesi sifo kungase kubangele ubuhlungu emhlane nasemilenzeni, igazi emchamweni, ukuvuvukala kwezinyawo, izimpawu ascites, kwesisindo.
Umdlavuza womlomo wesibeletho has izigaba ezine yentuthuko isimila:
Isiteji mina - isimila itholakala emzimbeni kwesibeletho, ngaphandle kokuphazamisa zezicubu ezizungezile;
Isiteji II - kukhona lesion wesibeletho umzimba wonke;
Isiteji II - isimila lihlasela amafutha parametrial kungase iyakhula e sangasese futhi iseduze zamanzi;
IV esiteji - inqubo isimila ukusakaza ngale ukhalo, zingakhula zibe isinye, amathumbu noma ingemuva.
adenocarcinoma lesizalo. ukwelashwa
Adenocarcinoma Ukwelashwa incike ngobucayi isifo, ubudala yowesifazane neyesilo isimo sempilo yakhe ngesikhathi ukuthola. Ngo esigabeni sokuqala Kwenziwa ukususa kwesibeletho nge adnexa. In the isinyathelo sesibili, ngaphandle kwesibeletho kanye adnexa isuswe eseduze lymph node, okungase mhlawumbe kube metastases. izigaba kwesikhathi lomdlavuza iphathwa ukwelashwa ngemisebe noma imiphumela emibi yokwelashwa ngamakhemikhali, abesifazane baphathwa, kumelwe ibe ngaphansi observation njalo. Eminyakeni yamuva, ukuphathwa ezijwayeleke kakhulu umdlavuza kwesibeletho kubhekwa ama-hormone, it is mhlawumbe eyenziwa i Izibikezelo okungekuhle. Uma kwenzeka ukuthi umbandela lesiguli kuyinto contraindication ukuhlinzwa, kungenzeka ukuthi wanikela concomitant radiotherapy. Lapho Ukudlulela elikude noma lokubuya kwesifo isimila nesineke bangakwazi ukunikeza polychemotherapy.
Ngokuvamile akwenzeki ukuvimbela ukuthuthukiswa adenocarcinoma Nokho, kungenzeka ukuba bathathe isinyathelo ekunciphiseni ingozi yokuba lesizalo adenocarcinoma. Ukuvimbela ekwelapheni izifo (isifo sikashukela) kanye kwesisindo, kubalulekile ukuba abukeze Ukudla ebhekiswe ukusetshenziswa enkulu amakhambi fresh, izithelo, imifino kanye nemikhiqizo yobisi. Ukunciphisa ikhalori eyanele nokwandisa umsebenzi ngokomzimba kungenye indlela ephumelela kakhulu ukunciphisa izinga lokuhlasela kwesifo wesibeletho umdlavuza ingozi.
Ukudla okunempilo, imodi efanele emsebenzini kanye nokuphumula, ukuziphatha zokuziphatha ezinomthelela ekuphileni eside futhi eside ngaphandle umdlavuza. Kulokhu, akukho webele adenocarcinoma, noma umdlavuza kwezitho zesifazane zangasese abesifazane Ngeke esabe.
5 Laba imikhuba bayozuza inhliziyo yakho
Lapho kusondela ukucinana kwemigudu yokuphefumula: ukwelashwa ekhaya
Disc protrusion - zokugula lamadiski intervertebral
Owakhileyo Elisha - isihlahla ingungumbane
Van Gogh lombukiso eMoscow "emidwebweni savuka" - Angisoze ngakulibala engakubona
ESri Lanka, sathula Amathrendi amasha kwimfundo, kuhlanganise uhlelo Ukulifunda ngijule kwengqondo
Izimonyo Natura Siberica: ukubuyekezwa kanye Uhlolojikelele umkhiqizo